मेवाले फाइदा मात्रै होईन यस्तो अवस्थामा बेफाइदा पनि गर्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
मेवाले फाइदा मात्रै होईन यस्तो अवस्थामा बेफाइदा पनि गर्छ !!
तर, मेवाले सबै अवस्थामा फाइदा गर्दैन, बेफाइदा पनि गर्छ । आयुर्वेदका अनुसार केही विशेष अवस्थामा मेवाको सेवनले शरीरलाई फाइदा गर्नुको सट्टा उल्टै हानी पु¥याउन सक्छ । तर त्यो अवस्था कति बेला सिर्जना हुन्छ ? मेवा कुनबेला खाने, कुन बेला नखाने ?
मेवाको बिउ सेवन गर्नुहोस्, यी खतरनाक रोगहरुबाट छुटकारा पाउनुहोस् !
मेवाको बिउमा उपलब्ध पोषण तत्वले कलेजोमा लागेको सिरोसिस भन्ने रोगबाट सहजै छुटकारा दिलाउँछ । सिरोसिस भन्ने रोग अत्यधिक रक्सि सेवन बाट हुन्छ । मेवाको ५–६ वटा सुकेको बिउ लिनुहोस् र यसलाई सिलौटोमा पिन्नुहोस् ।
काँचो मेवाको दूधमा गिलसिरिन मिसाएर जिब्रोमा विहान÷वेलुका दल्ने गरे केही दिनमा ठिक हुन्छ ।
काँचो मेवा ताछेर नियमित दिनमा ४÷५ टुक्रा सेवन गर्ने गरेमा अल्काई बढ्न पाउँदैन र निको हुँदै जान्छ ।
काँचो मेवाको टुक्रा पकाएर पानीले गारगल गरेमा २÷३ दिनमा ठिक हुन्छ ।